Taageero xooggan oo loo hayo dib u habeynta sharciga galmada la xiriira - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Karin Malmhav / TT.
Taageero xooggan oo loo hayo dib u habeynta sharciga galmada la xiriira
La daabacay fredag 24 januari 2014 kl 10.39
Waxaa baarlamaanka dhexdiisa aad ugu soo kordhay xildhibaanada taageersan in sharciga lagu caddeeyo in ay shuruud tahay in dadka isla galmoonayaa ay isku waafaqsan yihiin. Xisbiga Mooderaatka ayaa hadda ah xisbiga keli ah oo diiddan dib u habeynta sharciga galmada. Xisbiga Sooshitaal-dimoqraadiga ayaa hadda isaguna doonaya in arrintaan dib loo baaro, sida idaacadda Ekot soo werisey.
- Waxaan dooneynnaa in dib loo eego sharciga dembiyada galmada la xiriira. Run ahaantii dareen ayaan ka qaadannay doodaha socda, iyo marxaladaha cusub ee siyaasadda. Mar haddii ay sidaas tahay waxaa ila macquulsan in la isugu yeero guddi cusub oo barlamaani ah oo dib u eega sharciga kufsiga oo si dhab ah loogu kuurgalo arrinta isku waafaqsanaanta, ayuu yiri Morgan Johansson (S) oo guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee arrimaha sharciga.
Kadib markii xukumo badan soo dhaceen oo la siidaayey nin lagu tuhunsanaa kufsi ayey soo korodhay doodda ku saabsan sharciga khuseeya isku waafaqsanaanta isla galmoodka. Haddiiba ay dhici karto in maxkamadi siideyso nin kufsi lagu soo dacweeyey sababtoo ah maya loo turjumi karo haa ama oggolaansho, kolkaas sharciga hadda jiraa ma ahan mid kaamil ah. Sidaasna waxaa qaba dadka ku doodaya in sharciga dib wax looga beddelo.
Dhaqdhaqaaqyo arrintaan la xiriira ayaa hadda baarlamaanka laga dareemayaa. Xisbiga Doogga iyo Bidixda ayaa dalabka arrintaan muddo soo wadey, halka uu xisbiga Dhexena ayidsan yahay. Xisbiga Sverigedemokraterna ayaan weli go’aankisa caddeyn in kastoo uu muujiyey ayidsanaan taxadar leh.
Kadib markii uu xisbiga Folkpartiet ku biiray ayuu xisbiga Mooderaatku noqday xisbiga keli ah ee xisbiyada dowladda oo isagu weli diiddan.
Waxaa laga yaaba in ay waqti dheer qaadato sidii loo heli lahaa sharci cusub haddii uusan baarlamaanku ka wadamideysneyn arrintaas. Kuxigeenka guddoomiyaha guddiga sharciga Johan Linander oo xisbiga Dhexe ka tirsan ayaa qaba in isxulufeysiga xisbiyadu ay tahay carqalad weyn oo hortaagan.